I-Instagram, Amanyathelo okuGcina iiFoto zam Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
I-Instagram, amanyathelo okugcina iifoto zam
I-Instagram lelinye lamaqonga entlalontle aphumeleleyo kwihlabathi liphela. Iifoto ezingenakubalwa zilayishwa yonke imihla kwaye amawaka amabali ayabelwana, kodwa lonke olu phando luhleli efini kwaye ngenxa yoko phantse akunakwenzeka ukufumana ukuba akukho nxibelelwano lwe-Intanethi.
Namhlanje amaqhinga amancinci aya kuboniswa anokuba nomtsalane kakhulu kwabo basebenzisa i-Instagram rhoqo okanye ngokulula kwabo babona nayiphi na ifoto kwaye bafuna ukuyikhuphela. Njengoko kufuneka uyazi, i-app iyodwa ayikuvumeli ukukhutshelwa komxholo kwabanye abantuNgethamsanqa, kwiivenkile zeapps nakuyo yonke i-intanethi kukho uninzi lwezicelo ezikuvumela ukuba ukhuphele yonke le mxholo.
Gcina imifanekiso kunye neevidiyo
Into yokuqala yokwenza kukujonga usetyenziso kwivenkile yeapp, enceda ukukhuphela umfanekiso okanye ividiyo ofuna ukuyigcina kwifowuni. Kwimeko yenkqubo yokusebenza ye-Android, Ivenkile inezicelo ezininzi ezakhiwe kakuhle kule njongo.
Eziapps, ubukhulu becala, zilula ukuzisebenzisa kwaye azilinganisi kakhulu kwisixhobo. Phantse zonke zinendlela efanayo, apho umfanekiso okanye ividiyo kufuneka kwabelwane ngayo kunye nesicelo kwaye yenza inkqubo yokukhuphela ngokuzenzekelayo. Emva kwexesha, siza kubona umzekelo wale nto, kodwa okwangoku kulungile ukugxininisa ukuba eziapps azonakalisi kwaye akukho mfuneko yokongeza iakhawunti ye-Instagram ngqo.
Ufanele uzigcine njani iifoto kwi-instagram?
Masithathe njengomzekelo isicelo "Umkhupheli weefoto kunye nevidiyo ze-instagram". Esi sicelo sikwi-PlayStore, kwaye xa sele ukhutshelwe kufanelekile kuphela ukuba ungene njengakwezinye izicelo kwaye ungaqala ukuyisebenzisa.
Oku kwenziwe, ndiyazi Kuya kufuneka ujonge umfanekiso ukuba ufuna ukukhuphela kwi-instagram.
Emva koko, kuya kufuneka ucinezele amanqaku amathathu ezibonakala phezulu kumfanekiso.
Emva koko kufuneka khetha "ikopi yekhonkco", kwifestile ephumayo.
Ukulandela oku, kuya kufuneka ufake isicelo sokukhuphela, apho kufuneka uncamathisele khona ikhonkco, (Kwezinye iimeko, ukwenza isenzo esikhankanywe ngasentla kuya kuvula ngokuzenzekelayo isicelo).
Ngayiphi na imeko, into ekufuneka yenziwe yile cinezela "gcina okanye ukhuphele", Njengoko kunokuba kunjalo, kwaye umfanekiso uya kubonakala kwigalari yefowuni.
Ukuqwalaselwa kokusebenzisa usetyenziso lokukhuphela
Kuyimfuneko ukugxininisa ukuba ezi zicelo zihlala zinika iindlela ezimbini ukuze zikwazi ukuzisebenzisa, eyokuqala kukungena ngqo ngedatha yeakhawunti ye-instagram yomntu, olu khetho luya kunceda ukulungelelanisa iinkqubo, kodwa kungabeka ubumfihlo bomntu emngciphekweni.
Olwesibini ukhetho kukusebenzisa usetyenziso ngaphandle kokongeza iiakhawunti, olu khetho lunokungalunganga kokwenza inkqubo ukuba ibe nde, kodwa kuyacetyiswa ukugcina ubumfihlo bukhuselekile. Ngokunjalo, kufuneka icace into yokuba ezi zicelo zizisa kunye nazo iintengiso, ezinokuba nzima.
1 Gcina imifanekiso kunye neevidiyo
1.1 Ufanele uzigcine njani iifoto kwi-instagram?
2 Ukuqwalaselwa kokusebenzisa usetyenziso lokukhuphela